Uyenza mpuluswa njani imiphetho kwi-Photoshop kunye nokuphucula ukhetho lwakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lola ifani | | Photoshop, Amaqhinga, Tutorials
Ukwenza ukhetho olufanelekileyo ngomnye wemisebenzi enzima kwi-Photoshop, kwesi sifundo siza kukubonisa iqhinga elilula kakhulu lokuphucula ukhetho lwakho kwinkqubo. Ukongeza, siza kuqwalasela izixhobo eziphambili zokukhetha kunye uya kufunda indlela yokugudlisa imiphetho kwi-Photoshop kunye nemaski yokukhetha.
1 Izixhobo zokukhetha kwi-Photoshop
1.1 Isixhobo sokhetho olukhawulezayo
1.2 Umlingo wand
1.3 Isixhobo sokukhetha into:
1.4 Khetha isihloko
2 Imaski yokhetho
2.1 Ibrashi yokugqibezela imiphetho
3 Iqhinga elilula lokwenza ukhetho olungcono kunye nemiphetho egudileyo kwiFotohop
3.1 Khetha isihloko
3.2 Yenza imaski yomaleko kunye nemvelaphi
3.3 Buyela kwisifundo esikhethiweyo kwaye uguqule ukhetho
3.4 Ukulungisa ukungafezeki ngemaski yomaleko
Izixhobo zokukhetha kwi-Photoshop
Izixhobo zokukhetha ezizenzekelayo zikuvumela ukuba ugcine ixesha elininzi, unazo Zonke zihlangene kwibar yesixhobo, Kuya kufuneka ucinezele kwaye ubambe kwindawo eboniswe kumfanekiso ongentla.
Isixhobo sokhetho olukhawulezayo
La isixhobo esikhawulezayo sokukhetha sisebenza njengebrashi yepeyinti. Ukuba ucofa ibrashi ngophawu oluqinisekileyo kwibar yezixhobo, xa upeyinta uyongeza kukhetho. Ukuba wenza impazamo kwaye ukhethe ngaphezulu, ungabamba iqhosha lokukhetha ukuba usebenza kwi-Mac okanye kwi-alt ukuba usebenza kwiWindows ukukhupha kukhetho.
Iziphumo ezilungileyo jonga «phucula imiphetho»Unokutshintsha ubungakanani bebrashi ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho.
Yenza ukhetho oluzenzekelayo ngokwenza unqakrazo olunye kummandla. Ngokunyamezelana, apha, kwimenyu yokukhetha izixhobo, Uxelela i-Photoshop ukuba ibanzi kangakanani umbala we-gamut Iiphikseli xa ukhetha, oko kukuthi:
Ukuba ubeka unyamezelo oluphantsi kakhulu, umzekelo 30, uya kukhetha iiphikseli kwi imibala efanayo kakhulu
Ukuba ubeka ukunyamezelana okuphezulu, umzekelo 60, uya kuvuma imibala emininzi ekukhetheni.
Kuya kufuneka uzame ukwazi ukuba yeyiphi eyona ichanekileyo, kuxhomekeke kwifoto nakwindawo oceba ukuyikhetha. Kubalulekile, phawula «egudileyo», Ke ukhetho luyakuphatha imiphetho ngcono.
Isixhobo sokukhetha into:
Ngokuzenzekelayo khetha into oyingqonge umfanekiso. Kufuneka urhuqe imouse kwaye inkqubo iya kuyifumana into.
Iyafumaneka kwibar yezixhobo xa ucofa nasiphi na isixhobo esizenzekelayo. Kule meko, Inkqubo ikhetha into okanye umxholo ophawulwe emfanekisweni.
Xa usenza ukhetho kwi-Photoshop imaski yokukhetha iya kuba lelona qabane lakho lilungileyo ukulungisa iimpazamo. Imaski yokhetho iyafumaneka ngokunqakraza nakwesiphi na isixhobo sokukhetha apha ngasentla.
Ungaseta iindlela zokujonga ezahlukeneyo:
Umbono wesikhumba se-anyanisi yenye yezona zisetyenziswa kakhulu. Kule meko, indawo ekhethiweyo ibonakala inombala kwaye imvelaphi (engakhethwanga) igutyungelwe zizikwere. Ungadlala ngenqanaba lokungafihli ukuze ubone ukuba ubandakanya ntoni kwaye ushiya ntoni ngaphandle.
Iingcebiso: Kwiimeko apho imvelaphi yomfanekiso ilula, sebenzisa imo yokujonga emnyama. Xa imvelaphi imnyama, imowudi yokujonga imhlophe. Ngale ndlela uyakubona ukuba ukhetho lwakho lufezeke kangakanani kwaye ukuba kukho i-halo ejikeleze imiphetho. Iyabulala kwaye yile nto siza kuyisombulula ngokusulungekisa imiphetho yokhetho.
Kwisixhobo sebar, ngaphakathi "kwemaski yokukhetha" imo, uyafumaneka ezinye izixhobo ukulungisa. Ezona ndizisebenzisa kakhulu ibrashi kunye nesixhobo sokhetho esikhawulezayo. Kodwa kukho isixhobo esinomdla kakhulu sokuhambisa umphetho: ibrashi kwimiphetho egqibeleleyo.
Ibrashi yokugqibezela imiphetho
Le brashi igudise imiphetho yokhetho kwaye ikuvumela ukuba ufumane iziphumo ezingcono. Isebenza njengayo nayiphi na enye ibrashi, ukuba, kwibar yezixhobo, ukhetha uphawu oluqinisekileyo olufaka kukhetho kwaye ukuba ukhetha okungalunganga uthabathe kukhetho. Ubungakanani bebrashi bunokutshintshwa.
Iqhinga elilula lokwenza ukhetho olungcono kunye nemiphetho egudileyo kwiFotohop
Isigqumathelo sokhetho siluncedo ekunciphiseni imiphetho kunye nokwenza ukhetho olungcono, kodwa ndiza kukubonisa iqhinga oya kuthi ngalo ukhethe ukhetho olucocekileyo ngephanyazo.
Into yokuqala esiza kuyenza yile khetha isihloko (Sebenzisa ezinye zezixhobo ezikhethiweyo ezikhethiweyo esizibonileyo). Umzekelo, ndiza kukhetha "ukukhetha isihloko", kodwa ungasebenzisa eyona ikulungeleyo.
Ukuba ukhetha, unokukhetha ingxowa-mali emva koko uguqule ukhetho ucofa umyalelo + shift + mna kwikhibhodi yakho yekhompyuter, ukuba uneMac, okanye ctrl + shift + Mna ukuba usebenza ngeWindows.
Yenza imaski yomaleko kunye nemvelaphi
Ke siza kwenza imaski yomaleko. Ungayenza ngokucinezela uphawu olubonakala kumfanekiso ongaphambili. Yenza umaleko wombala ofanayo ngaphantsi, khetha i-grey engathathi hlangothi. Ukuba uya usenza banzi, uya kubona ukuba umda ombi uye wangena kukhetho lwethu.
Buyela kwisifundo esikhethiweyo kwaye uguqule ukhetho
Into edla ngokusebenza kwezi meko yile lungisa ukhetho. Siza kuyenza ngolu hlobo lulandelayo:
Cima umaleko wombala oqinileyo kwaye ulahle imaski yomaleko. Unokwenza ulawulo + Z (Windows) okanye u-command + Z (Mac) ude ufike kwisifundo esikhethiweyo okanye uye kwithebhu »iwindow»> Imbali kwaye ucofe kwinyathelo «khetha isihloko».
Emva koko yiya kwimenyu ephezulu kwaye ku "ukhetho" tab ukukhangela "modify" kwaye ucofe ku "collapse". Ngeli nyathelo sifumana ukhetho lokunciphisa iipikseli ezimbalwa. Iwindow iya kuvulwa, njengoko i-halo esele imiphetho ilungile kakhulu, sifuna kuphela ukhetho lokuvala iipikseli ezi-2 okanye ezi-3, ke siya kubeka loo maxabiso.
Ukulungisa ukungafezeki ngemaski yomaleko
Ukuba ubona ukungafezeki, kuhlala kunjalo Unokwenza imaski yomaleko. Ngokucofa kuyo kwaye Ngebrashi ungazilungisa ezo mpazamo zincinci abenako ukuhlala. Khumbula ukuba ngombala omnyama asiyikhupheli ngaphandle yokhetho kunye nomhlophe siquka.
Ukuba ulithandile eliqhinga, awungekhe uliphose eli tshintsha umbala wayo nayiphi na into elula kwaye ukhawuleze kwi-Photoshop.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Indlela yokuhambisa imiphetho kwi-Photoshop kunye nokuphucula ukhetho lwakho
I-Adobe animate CC